FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA MOUNTAIN CUR DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika Mountain Cur Dog
ARBA Ch. Rocktalk's Cosmo, an'i Ron Stoute
Ny Mountain Cur dia namboarina noho ny fahaizany miasa. Alika be volo, henjana sy miasa miaraka amin'ny endrika Cur azy izay tena izy, na dia somary be generika aza. Ny palitao mavesatra dia mazàna ho lava kokoa noho ny an'ny hounds, saingy mbola fohy ihany. Milamina na marokoroko miaraka amina palitao malefaka sy malefaka. Ny loko dia misy, mavo, brindle, mainty, brindle ary mainty, matetika misy teboka fotsy. Ireo mpiompy dia nitatitra tamim-pireharehana fa 50% na mihoatra ny alika kely dia teraka miaraka amin'ny bobtail. Betsaka ny teraka miaraka amin'ny lalandà amin'ny tongony aoriana ary ny sasany manana roa amin'ny tongotra tsirairay. Tena be volo, malalaka ary hozatra manana loha matanjaka sy malalaka ary sofina fohy sy avo kokoa. Mahery sy hozatra ny hatoka. Matetika ny maso dia maizina miaraka amin'ny fomba fiteny miavaka sy maneho hevitra. Doha fisaka ny loha ary malalaka eo anelanelan'ny masony. Mavesatra ny molotra. Ny sofina dia fohy mankany antonony, avo avo miaraka amin'ny fifehezana. Ny tongotra tahaka ny saka dia matanjaka sy voarindra tsara, napetraka haingana. Ny tongotra mahitsy dia hozatra. Lalina ny tratra ary mahitsy ny lamosina.
Tsy alika mpilefitra sy mora tohina ity. Miaraka amin'ny hamafiny sy herim-po hiadiana amin'ny saka tezitra be sy be dia be, ireto Kurs ireto dia nianatra ny ho tapa-kevitra sy tsy ho kivy. Matetika mangina eny an-dàlana izy ireo, manao alika mpiambina tsy miova, nefa azo antoka fa tsy mety amin'ny faritra ambanivohitra, izay tsy misy antso hiasa. Miovaova arakaraka ny fihenjanana ny fahaiza-mamakivaky, saingy manana orona ampy hanarahana lalao izy ireo ary maro no manana fahaizan'ny hazo. Ny tsipika sasany dia nompiana ho an'ny alika hazo ary ny hafa kosa ho an'ny baying. Ity lalao goavambe goavambe ity, Raccoon ary mpihaza squirrel dia vonona ny hiatrika hareza na vorona mpihaza tezitra rehefa voahidy. Maniry mafy ny hampifaly ny tompony izy. Tena miaro ny fananana sy ny fianakaviana tsy misy tompony izay mibahan-toerana bebe kokoa noho ny tenany dia afaka lasa miaro be loatra . Ny Mountain Cur dia nalaza noho ny fahasahiany. Ity alika mpihaza ity dia hisambotra omby adala eo amin'ny orona ary hihazona ny tanany na dia amin'ny bera aza rehefa atahorana. Ny tanjona amin'ny fampiofanana an'io alika io dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra tsara ny tsipika ary apetraka ny fitsipika. Satria a mifampiresaka ny alika ny tsy fahafaliany amin'ny mimonomonona ary amin'ny farany manaikitra, ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Ny olombelona no tokony hanapa-kevitra fa tsy ny alika. Io ihany no làlanao fifandraisana amin'ny alikanao mety ho fahombiazana tanteraka.
Hahavony: 18 - 26 santimetatra (46 - 66 cm)
Milanja: 30 - 60 pounds (13 - 27 kg)
Ny Mountain Cur dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Izy io dia namboarina ho an'ny asa ary ho sambatra indrindra amin'ny asa tokony hatao.
Ny Mountain Cur dia alika miasa be izay mila fampihetseham-batana isan'andro. Rehefa tsy mihaza dia mila entina isan'andro, lava, haingana MANDEHANA na jogging. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Ho fanampin'izany, handray soa avy amin'ny faritra lehibe sy azo antoka izay ahafahany mivoaka malalaka. Ity karazana ity dia mankafy hetsika ivelany sy fanatanjahantena.
rottweiler afangaro amin'ny retriever volamena
Ankizy 3 ka hatramin'ny 8 eo ho eo
Ny volony fohy amin'ny Mountain Cur dia mora karakaraina. Indraindray borosy sy borosy hanala volo maty sy malalaka. Mandrosoa raha tsy ilaina, satria ny fandroana dia afaka manamaina ny hoditra, miteraka olana amin'ny hoditra. Tazomy mba tsy ho be volo be ny lakandranon-tsofina ary hokapohina ny rantsan-tongotra.
Kurs maro karazana dia naterina niaraka tamin'ireo mpifindra monina avy tany Eropa nankany Amerika ary niara-nivady tamin'ny Curs teratany. Ity fitambarana canine tsy azo antoka sy somary saro-kenatra ity dia niteraka an'i Cur tsy azo ekena afaka hanaraka ny fomba fiainan'ny mpisava lalana sy ny Indiana. Ity mpitsangatsangana an-dohasahan'i Ohio River Valley ity dia inoana fa manana setroky ny setroky ny fototarazon'i Cur, ankoatry ny fitaoman'ireo mpiandry omby sy mpiompy. Ampiasaina matetika ho toy ny hazo na alika bay izy, fa maro ihany koa ireo mpanamory fiaran-dalamby. Izy ireo dia nipoitra tamin'ny fotoana naha-vaovao an'i Etazonia ary tena fahita any an-dohasahan'i Ohio River. Rehefa nifindra hanokatra ny Andrefana ny sisin-tany sy ny fianakaviany iray manontolo, dia niaraka tamin'izy ireo ny Cur Dogs. Ireo izay mankasitraka an'io karazany io dia milaza fa ankoatry ny fiompiana alika dia misy andiana 'Indian Cur' (alika karazana paria) ao anaty makiazy. Na dia antsoina hoe 'tendrombohitra' aza izy ireo noho ny tombotsoany manokana amin'ireo monina any an'ala sy an'ala, dia nanao izany ihany koa izy ireo tany amin'ny heniheny na maina, na toerana hafa misy fari-piainana henjana. Ilay boky 'Old Yeller', momba ny zazalahy mitombo amin'ny sisin-tanin'i Texas sy ny alika, izay iantsoana ilay boky, dia Mountain Cur (tsy toy ny sarimihetsika, izay asiana alika karazana Lab). Ao amin'ny boky, Old Yeller dia alika fohy bobongolo sy miloko mavo izay mihaza sy hazo, tsy matahotra miady amin'ny bera lehibe rehefa atahorana, ary mandeha ho azy ny orona rehefa miatrika omby adala. Mazava be ny filazan'ny mpanoratra ny famaritana an'io karazana taloha io sy ny fampiasana azy amin'ny mpisava lalana. Ny anarana hoe 'Mountain Cur' dia tsy voatonona ao anaty boky mihitsy, na izany aza, tamin'izany andro izany dia tsy nanana anarana na identité manokana ny karazany. Ny alika Mountain Cur dia sokajina tsikelikely amin'ny karazany tsirairay. ny Treeing Tennessee Brindle , Stock Stephens , ary ny Cur View Mountain ampiasao ny hitoviana amin'ny karazan'olona iray ihany, saingy ireo dia nahavita tena manokana hanamarinana ireo vondrona misoratra anarana. Tamin'ny faran'ny ady lehibe farany, vitsy dia vitsy ireo sisa tavela tamin'ny Mountain Curs taloha. Tomponolona maty antoka ihany no mitazona tahiry vitsivitsy any amin'ny honahona mitokana sy faritra be tendrombohitra any atsimo atsinanana. Izy ireo no zana-kazo tranainy indrindra Cur ary mankafy ny fahaterahana indray, mitovy amin'ny karazany Cur hafa. Ny Association Mountain Breeders Association tany am-boalohany dia nanoratra ny karazany hatramin'ny faramparan'ny taona 50.
Ny alika Cur no volombava amerikana tena marina sy miavaka. Ny tsipika voalohany indrindra dia azo zahana manerana an'i Etazonia atsimo, indrindra eo akaikin'ny Tendrombohitra Appalachian. Nitondra alika eoropeanina niaraka tamin'izy ireo ny mponin-tany, indrindra ny fihazana azy ireo. Ireo alika ireo dia niampita tamin'ny alika tompon-tany, ny ankamaroany dia ny Cur India, ary io karazana tsy manam-paharoa io dia nisy. Hounds dia nitondra fahaizana manitra fatratra ary helodrano mafy sy madio (na dia fantatry ny chop aza ny ankamaroan'ny Curs, ary manana bawl hafa i Hounds). Ny rà terrier dia nanampy grit sy faharetana izay tsy misy karazana alika hafa azo ampitahaina. Na ny hound na ny terrier dia mbola tsy mitovy kalitao raha oharina amin'ny alika hafa. Na dia tsy raisina ho karazana mpiandry ondry aza ny Cur dia nizara razamben'ny mpiandry ondry ihany koa teo aloha Beauceron , manokana. Na dia tsy mpiandry nentim-paharazana aza dia nampiasaina hanangonana tahiry marokoroko ny Cur. Texas Longhorn Ny omby sy ny kisoa mpiompy dia tsy maintsy nitantana ity alika ity fa tsy omby na ondry mahazatra.
Ny Cur maoderina dia mbola alika mpihaza mahazatra. Raha ny fahitana azy dia saika ny any atsimo ihany, ity alika fiompiana ity dia tsy misy farany. Izy io dia mahazaka na inona na inona amin'ny squirrels ary raccoons ny mitondra , lambo sy omby. Ary koa, alika mpamboly kilasy voalohany. Izy ireo koa dia mpanaraka ambony noho ny salan'isa na dia tsy dia mahomby toa an'i Coonhound aza izy ireo ary tsy miantso am-peo. Ny ozona koa dia tena mitazona sy miaro ny fianakaviany - toetra iray hita any amin'ny terriers ary matetika mpiandry, nefa azo antoka fa tsy hounds. Noho izany, manao alika mpiaro tena tsara izy ireo. Na izany aza, ilaina ny manamarika fa ity karazana ity dia matetika tsy mety amin'ny biby. Na dia sariaka sy tsy mivadika aza, toy ny alika mihaza indrindra, ny tena toetran'i Mountain Cur dia amin'ny haza lambo fa tsy ao an-trano. Betsaka ny olona mampiditra karazana hafa any amin'ny Mountain Cur, na izany aza, ankoatry ny orona tsara an'i Hound, tsy ilaina izany satria ny Cur tsara dia tokony hanana ny toetran'ny alika mihaza rehetra. Nahita fankatoavana izy tao anatin'ny firaketana azy manokana, ny OMCBA, na ny Association Mountain Cur Breeder's Association ary ny United Kennel Club.
KSBA = Fikambanan'ny mpiompy stock an'ny Kemmer
OMCBA = Fikambanan'ny mpiompy cur Mountain
Ivy ity, cur cur an-tendrombohitra, feno 8 volana milanja coon.
'Ity i Benny. Izy dia Mountain Cur, voasoratra anarana OMCBA 4 volana, voasoratra anarana an'i Tina ao KS. Teraka tao amin'ny Castle Hill Mtn izy. Ozona any MO. Benny dia tsy ampiasaina hihaza ao an-tranony ary naman'ny mpianakavy. Izy dia alikakely tena marani-tsaina ary mbola mianatra ny toetrany zazalahy kely. '
Random Rescue Meg, zazakely 2 taona nanavotra ny Mountain Cur purebred
Jasmine ilay cur cur mainty sy mainty
Jasmine ilay Cur cur mainty sy mainty miaraka amina kilalao ao am-bavany
'Manana cur cur Mountain azonay izahay fony izy tokony ho 9 herinandro, aseho eto amin'ny 1 taona. Izy dia karazana tsy fahita firy ho an'ny karazana Mountain Cur. Manga sy fotsy ny lokony. Tsy manana ny bobtail izy fa ny karazany miolakolaka kokoa ho an'ny karazany. Ny ankabeazan'ny rahalahiny sy ny zananivavy teraka tao anaty fako iray ihany dia boribory vita amin'ny bobtails. Manana taratasy NKC izy. Betsaka ny olona no nilaza fa tsy hifanaraka amin'ny saka sy biby kely hafa ity karazana karazany ity izay hitako fa raha mampianatra azy ireo hatramin'ny fahazazany dia hanaja ny biby rehetra ao an-trano izy ireo. Mino aho fa ity karazana ity dia toy ny coyote ary alika tena izy. Indraindray izy dia mety ho tena sarobidy ary amin'ny fotoana hafa dia tena sahy sy be herim-po. Tiany ny lalao ary toa mahavita tsara any amin'ny faritra amoron-tsiraka izy miaraka amin'ny fanatanjahan-tena. Mandeha an-tongotra isan'andro izy ary tia milalao fakana. Manana ny tena fatim-pihazana izy fa mampiseho izany fihetsika izany any ivelan'ny trano fotsiny. Saro-kenatra amin'ny olon-tsy fantatra izy, tsy mahery setra fa tena manaiky. '
Mountain Cur sy miloko fotsy Cur iray amin'ny 1 taona miaraka amin'ny saka
Hijery ohatra bebe kokoa momba ny Mountain Cur
Sary Cur Mountain
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Rottweiler
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika border Collie
Lisitry ny alika misafoaka Saint Bernard
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika espaniola Tibetana
Alaskan Husky vs. Siberian Husky
Fitazomana ny boriky / ampondra / Burro toy ny biby fiompy
Italiana Grey Min Pin Dog Fampahalalana momba ny fiompiana sy sary
Fampahalalana momba ny alika Woodle Dog
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika rano espaniola
teacup aostraliana mpiandry ondry efa lehibe
fifangaroana weimaraner lab sôkôla amidy
jack russell sy ny faritry collie mix
manao ahoana ny alika omby mastiff
mampiseho ahy ny sarin 'ny bichon frize
Malagasy bulldog pitbull Mix fiofanana